संसारकै बिहानीको देश फिजीमा भेटियो नेपाली बस्ती ! - Sidha News
अन्त्यमा, नेपाली देश रहुन्जेल मात्र देशसँग जोडिने हो, देश मेटिएपछि जोडिने आफ्नो समुदायसँग हो । त्यो समुदाय नै त्यो बेला अदृश्य राष्ट्र बन्दछ जुन भावनामा मात्र सीमाङ्कित हुन्छ । हामी एनआरएनहरूले यो कुरा महसुस गर्न थालिसकेका छौँ । हामी सीमारहित देशमा फिजीका नेपाली मात्र होइन, हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित संसारको कुनाकुनामा बाध्यताले च्यापिएर बसेका सबै ज्ञात–अज्ञात नेपालीलाई जोड्न प्रयत्न गरौँ । अब कसले कति कमायौँ त्यसको हिसाब गर्दै गरौँला, राष्ट्र र पहिचान दबाएर बसेका हाम्रा आफन्त जोड्न के गर्दै छौँ त्यसले नै इतिहासमा महत्व राख्नेछ । गुलाब जहाँ फुले पनि गुलाब भएरै फुल्दछ । जानी–नजानी फिजीका हाम्रा दाजुभाइ चौथो पुस्तामा समेत नेपाली भएर फुल्ने साहस गर्दै छन् । उनीहरूको नेपालसँग जोडिने र नेपाली बनेर मर्ने महान् सपना पूरा होस्, शुभकामना ! (घटना र विचारबाट)